Uppdaterades 18 feb 2021 13:39
xadidaada tirada macaamiisha ee qolka isla hal mar wada joogta
macaamiisha ogeysiiya inay u adeegtaan hab marka laga eego dhinaca xakamaynta infegshanka sugan, sida inay kaligood soo adeegtaan iyo inay adeegtaan xiliyada aanay saxmad/ciriiri badani jirin
Dhamaan goobaha adeega/Makhaayadaha waxa saaran mas'uuliyad ay tahay inay qaadaan tallaabooyin loogaga hortagaayo faafitaanka covid-19. Waxyaalaha soo socda ayaa shaqeynaaya:
Ugu badnaan afar qof ayay tahay inay miis wada fariistaan. Taasi waxay shaqeynaysaa laga bilaabo taariikhada 24 Diisembar.
In la bixiyo cabitaanada khamrada leh iyo cabitaanka laga diyaariyey waxyaalaha khamrada la midka ah ayaa mamnuuc ah laga bilaabo saacada 20.00. Taasi waxay shaqeynaysaa laga bilaabo taariikhada 24 Diisembar.
Goobaha adeega waa inay sidoo kale:
ay hirgeliso tallaabooyin si looga fogaado in saxmad/ciriiri badan dadka dhexdiisa ka yimaado safafka, miisaska, bufeega/cuntada iyo sharaabka miiska weyn laga soo gurto yaala ama miiska baarka.
hubiso in soo booqdeyaashu ay ugu yaraan hal mitir ka fogaan karaan dadka kale.
kaliya cuntada iyo cabitaan u geeya dadka martida ee fadhiya miiska ama miiska baarka.
haddii ay suurtogal tahay martida u ogolaada inay iyagu cuntadooda iyo cabitaankooda dalbadaan oo ay qaataan, ilaa inta aanay taasi keeni karin saxmad/ciriiri badan ama saf.
bixinaay fursada gacmaha saabuun iyo biyo loogu dhaqaayo ama bixinaaya isbiirtada gacmaha.
ku wargaliyaan soo booqdayaasha sida ay u yarayn karaan halista faafitaanka cudurka.
Kamuunada ayaa mas'uul ka ah kormeerida goobaha adeega. Haddii aad dareemeyso inaan xeerarka la raaceynin ayaad la soo xiriiri kartaa kamuunka ay goobta adeegu ku taalo.
Xeerarka Folkhälsomyndighetens ee makhaayadaha cuntada iyo baararka
Folkhälsomyndigheten: Talaabooyinka ku meel gaarka ah ee xakamaynta infegshanka ee goobaha adeega
Macluumaad ku saabsan Folkhälsomyndighetens su'aalo iyo jawaabo